(SaWIRRO) Tartanka Qur’aanka Gobolada Puntland oo ka furmay magaalada Garowe | puntlandi.com
(SaWIRRO) Tartanka Qur’aanka Gobolada Puntland oo ka furmay magaalada Garowe
(Puntlandi.com) Tartankaan oo ay sanadkaan kasoo geyb galeen arday ka socota 16 degmo oo katirsan gobolada Puntland, ayaa waxay ku tartamayaan heerarka Qur’aanka Oo kala ah 30Jus-20Jus-10Jus, Waxaana dhamaan Ardaydaan Oo wajiyadooda laga dheehan karay Farxad iyo sida uu Arday walba usoo diyaar garoobay.
Tartankaan waxaa kasoo qayb galay Xubno ka socday Dowladda Puntland oo uu hogaaminayo Wasiirka Cadaaladda iyo arrimaha diinta saalax Xabiib Jaamac, madaxda mu’asasada Alminhaaj, Culimo Awdiin, Ganacsato iyo Boqolaal Dadwene ah oo soo camiray Masjidka.
Ugu horayntii waxaa goobta ka hadlay Gudomiyaha Tartanka Sh.Axmed Yuusuf Daad Oo kawarbixiyay Tartanka ka iyo heerarkii uu soomaray iyo waliba Cida dhaqaale ku taageeratay iyo Halka ay kaklasocdaan Tartamayaashu waxaana uu Xusay Sheekhu Maalgaliyasha Sanadkaan ugu weyn inay yihiin madaxweynaha dowladda Puntland iyo shirkada Golis.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay Sh.Mukhtaar Axmed Faarax Gudoomiyaha Mu’asasada Al-Minhaaj Gobolka Nugaal oo isna dhankiisa Kahadlay Sida Ay Ka Mu’asasa Ahaan Ugu Faraxsan Yihiin Iyo waliba In sanadwalba laguqabto Garowe waxaana uu mahadcelin u soo jeedshay cidwalba oo kaqayb qaadatay .
Ugu danbayntii waxaa Xaflada Si rasmi ah U Furay Wasiirka Cadaaladda Iyo Arimaha Diinta Mudane Saalax Xabiib waxaana uu u hanbalyo udiray ardayda isaga oo xusay in dhammaan Ardaydaani ay yihiin Kuwa guulaystay dhanka kale waxaa uu bulshada ugu baaqay in ay Wey neeyaan Kalaamka ALLAH Waxaana uu kudhawaaqay intartanku si rasmi hh u furan yahay .
Waxaa goobta laga soo jeedshay dardaaran Iyo Dhiiri galin ku wajahan ardayda tartamaysa iyo Guud ahaan bulshada waxaana dhamaan mas’uuliyiintii goobta kahadshay ku baaqeen in lajoog teeyo barashada iyo ku camal falka kitaabka Allah.